Mpiasan’ny fahasalamana miisa 661 no novatsiana fitaovana sy akanjo fiarovana. Hopitaly miisa 53 sy Tobim-pahasalamana 318 ihany koa no hahazo tombony amin'izao fiaraha-miasa amin'ny Governemanta Japoney sy ny UNFPA izao.
Misy fitaovana sy kojakoja 3 025 ihany koa homena ireo vehivavy hiatrika fiterahana. Toeram-pitsaboana miisa 5 any amin’ireo toerana tena saro-dalana no nahazo « moto » hahafahan’ireo mpiasan’ny fahasalamana manatanteraka tsara ny asany.
Efa nanomboka ny Talata 10 novambra lasa teo ny fitsinjarana ireo fitaovana rehetra ireo manerana ny Faritra sy Distrika maro eto amintsika.